China Kuomesa Nucleator BT-9801Z Mugadziri uye Mutengesi | BGT
Kuomesa Nucleator BT-9801Z
BT-9801Z ndeyemunyu wemunyu, ine yakanakisa kupararira, yakanaka kemikari inertia uye kupisa kupisa.
Inonyanya kushandiswa kwePP zvinhu.
BT-9801Z Inogona kushandiswa kuwedzera crystallizing tembiricha PP uye kuti rikurumidze ari crystallizing velocity, kusimudzira crystallization pamusoro nebwe uye kuti zvakanaka mamiriro mamiriro sekristaro zviyo kuburikidza kupa sekristaro nuclei, nokudaro zvinogona pachena kuvandudza Manyiminya uye zvemaziso zvesimba zvigadzirwa .
Mumiriri uyu anoiswa kuchinodzo chekushandurwa kwezvigadzirwa zvePP uye inosimbiswa sekemikari isina chepfu nePrevention and Control Center yeZirwere yakabatana muChina.
Sechinoshandura che polyolefin resin crystallization, Nyukireya Mumiririinogona kuita zvigadzirwa zvepurasitiki zvine yakanaka yekugadzirisa mashandiro uye mashandiro ekuita mashandiro. Kuti upe kutamba kuzere kune zvakanakira wega wega Nyukireya Mumiriri, mumakore achangopfuura, huru yekuvandudza nzira ndeyekusanganisa kweNyukireya Mumiriri. Iko kune yakakosha synergistic mhedzisiro yezvinhu zvisina kujairika, zvisikwa kana akasiyana masystem eNucleating Mumiriri. Multicomponent kusanganisa chinhu chakakosha maitiro mukuvandudzika kwezvazvino polymer zvinowedzera. Sezvinei, sorbitol yakavakirwa Nucleating Agent inozivikanwa kwazvo mumusika wepasi rose kwenguva iripo.
Pashure: Kuomesa Nucleator BT-20
Zvadaro: Kuomesa Nucleator BT-9806
Isiri-Kunhuhwirira Inotadzisa Nucleator
Kuomesa Nucleator Ye PE
Kuomesa Kwakachena Nucleator